Kulankii u socday Ra’iisul wasaare Rooble iyo Xubno ka socday beesha caalamka oo goor dhawayd soo dhamaaday. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kulankii u socday Ra’iisul wasaare Rooble iyo Xubno ka socday beesha caalamka...
Kulankii u socday Ra’iisul wasaare Rooble iyo Xubno ka socday beesha caalamka oo goor dhawayd soo dhamaaday.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay wakiillada beesha caalamka ee Soomaaliya, ee isku dayaya inay xal u helaan muranka ka taagan doorashada Soomaaliya.
Qoraal kooban oo lagu baahiyey barta twitterka ra’iisul wasaare ayaa lagu sheegay in kulankaas looga hadlay laba qodob oo muhiim u ah Soomaaliya. Ra’iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in labadaas qodob ay kala yihiin:
1- Ka gudbista caqabadaha hor-taagan xal u heliadda is-mari waaga ka taagan doorashada Soomaaliya.
2 – Iyo dhowrista xasiloonida guud ee dalka, kadib rabshadihii ka dhacay Muqdisho.
“Waxaan Wakiillada Beesha Caalamka la yeeshay kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka. Waxaan is dhaafsannay aragtiyo ku aaddan habka ugu habboon ee looga gudbi karo caqabadaha jira, qabsoomidda doorasho si nabad ah ku dhacda & dhowrista xasilloonida guud ee dalka,” ayaa lagu yiri qoraalkan oo lagu baahiyey twitterka Rooble.
Wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira turxaan bixinta khilaafka madaxda Soomaalida oo ku heshii waayey doorashooyinka dalka, waxayna caqabadda ugu weyn ka taagan tahay sidii la isugu keeni lahaa.
Madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa si cad u diiday inay ka soo qeyb galaan shirka uu gogoshiisa Muqdisho dhigay Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxayna shuruudo adag ku xireen ka qeyb galka shir dambe oo looga hadlayo doorashada dalka.
Previous articleMaxkamad ku taalla Jarmalka oo sarkaal horay uga tirsanaa sirdoonka Suuriya ku xukumay afar sano oo xarig ah.
Next articleDacwad Shirkad Ganacsi oo Cunaqabateysay inaan Qaaadka itoobiya waydaarsano kaluunka dalka taas oon kasoo dhameysanay Itoobiya 7 Ton maalinkii oo kaluun ah
Jarmalka oo 10 sanno xariga ah ku xukumay nin reer Ciraaq...
BreakingNews: Dayniile oo heshay macluumaadkan ama warkan Maxamed Cabdulqadir Qaamey (Shakiib)